Fitsipahan’ny HCC ny lalam-pifidianana : Miboridana tanteraka ny fitondarana sy ireo depiote-ny | Ny Valosoa Vaovao
par gvalosoa | Mai 6, 2018 | Edito | 1 commentaire
Raha ny lojika politika na ny rafitra demokratika dia ny fametraham-pialan’ny Governemanta Olivier Mahafaly no tokony hitranga, tao aorian’ny nitsipahan’ny HCC, n any Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana ireo volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana. Raha ny nambaran’ireo depiote ho amin’ny Fanovana miisa 73 dia nandaniana volabe 50 tapitrisa Ar isaky ny depiote nanangan-tanana, nandany iny volavolan-dalàm-pifidianana iny, nefa dia izao notsipahan’ny HCC izao. Fivoriana tsy ara-potoana miisa 4 no natao nefa dia nodakan’ny andrimpanjana etsy Ambohidahy ambavafo ny Praiministra sy ny governemantany, ny antoko HVM sy ireo Parlemanterany, na depiote io na senateran’i Madagasikara, nandany iny volavolan-dalàna tsy alehany iny. Miala ny governemanta, manaraka avy eo ny ambiny , toy ny ao amin’ny Parlemanta roa ary miafara amin’ny fialàn’ny filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina, satria dia efa fitondrana tsy mahavita azy sy manaonao foana no misy eto amintsika. Na inona na inona hambara dia tsy vitan’ny mihozongozona intsony ity fitondrana HVM ity, fa efa manomboka miala amin’ny fakany ary mitady lalana hivoahana mba tsy hianjeran’ny hatezeram-bahoka, izay sisa no hataon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny forongony. Mbola manao gisa lahy mangala-ketsa foana anefa ireo Depiote mpila ranondranony , toa aningahy Depiote voafidy etsy Atsimondrano Jaona Elite. Raha tena mpanao politika ingahirainy dia ny fametraham-pialàna tsy misy hatak’andro tsy ho solombavambahoaka intsony koa no tokony hataony, mahalalà menatra, satria tsy ny vahoaka izay tsy noraharahiany no tsy mila azy ankehitriny fa ny mpitsara ambony ao amin’ny HCC mihitsy no tsy nanaiky ny hadalàna vitan’izy ireo tamin’ny fandaniana iny lalàna sadasada iny. Raha tsy izay no mitranga dia voamarina fa tena efa ny vola sy ny voninahitra no mibaiko ny feon’ny fieritreretan’izy ireo.
Miboridana tanteraka ankehitriny ireo depiote milaza fa mandala ny ara-dalàna ary ny sasany tamin’izy ireo aza moa dia efa nihanjaka ara-bakiteny, miboridana toy izany ihany koa ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina manontolo .Tampina ny daomy araka ny filazan’ny mpahay azy ary tsy iza no naha tampina azy fa ireo manodidina ny filoham-pirenena ihany satria hevi-diso sy hoditr’akondro hatrany no natolony ny filohany nanomboka hatrany amboalohany ka hatramin’izao. Na izany aza dia tolorana vahaolana ihany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ka apetraho haingana ny fialànao andriamatoa filoha na fara- faharatsiny manaova fanambaràna fa tsy ho filoham-pieren’i Madagasikara intsony na rahoviana na rahoviana ianao. Mbola vao mainka ho afa-baraka tanteraka ianao Andriamatoa Filohampirenena hajaina Hery Rajaonarimampianina, raha ho hambaran’ny HCC koa amin’ny herinandro ho avy io, fa mitombina ny fanalana anao na “déchéance” anao araka ny fitorian’ireo depiote miisa 73 sy ny vahoaka. Ho tapitra amin’ny herinandro ho avy io koa mantsy ny 15 andro nametrahan’ireo depiote ho amin’ny Fanovana izany fitoriana izany. Izay efa nambaran’ny manam-pahaizana momba ny lalampanorenana koa fa azo raisina tsara izany fitoriana nataon’ireo solombavambahoaka izany ka naterina teny Ambohidahy. Ankoatra izany, mbola zava-doza koa anefa ny famoahan’ireo herim-pamoretana entana tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina na dia efa nanao fitokonana aza ireo mpiasa matihanina amin’izany. Tsy lazaina intsony ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena sy ny volam-bahoaka manerana ny faritra amin’izao fotoana izao. Mandrovi-tsihy tokoa ny mpitondra fanjakana satria efa fantany fa hifarana sahady ny fihinanany .
MARY	le 6 mai 2018 à 20 h 37 min
Ny polisy mpampiboridana ny vonihitr’i Madagasikara ery @ seranampiaramanidina fandalovan’ny zao tontolo. Mampijaly koa ireo ndrindra moa fa mpiray tanindrazana. Refa tsy manome vola na voandalana dia ilany vaniny ny entanao. Akorotana ambony ambany sy ilany vaninytahaka an’ireny tsy mandray karama ireny mihitsy ry zareo.
Eny koa tokony handehanan’mpitaritolona miaraka @ vahoka. Tena vay
Enga anie mba hiseho masoandro aorina kely ao ny hasinao ry NOSY MALALA. Mba tsy hiverimberina intsony ny rà mandrika.
! Hody ventiny zao tolona izao.
HISAKAFO tsara in3 isanandro @zay ny malagasy ary hisy hasiny @ mpitondrany. Tsy hanjakazakan’vahiny ntsony ny taninay fa hipetraka ho mpila ravinahitra fotsiny ireo fa tsy izy ireo no hanao ny lalàna . … tsy voatanisa ny haratsi-toetry ny sasany marina e.
Manao tompony mangataka atiny ny malagasy.
Ampio zahay sy ny tolonanay Andriamanitra ô.
Hanampy ny mpitolona sy ny tolona: Masina Misely Arakanjely.
Ny tafiky ny Lanitra ao ambony sy ny martiora malagasy rehetra hanambatra hery @ izao tolona zao ary mba ho farany ity.